Talooyin iyo Taageer Xaqiiqada Ku Saabsan Menthol-ka
Haddii aad sigaarka mentholka cabto, waxay u badan tahay in dareenka qaboojinta, marka lagu daro nikotiinka, uu yahay waxa marka hore ku soo jiitay. Taasi waxay ahayd marka hore qorshaha Shirkada Tobaakada. Waxaana aad suurtagal u ah inaad xubin ka tahay bulshooyinka Mareykanka Afrikaanka ah, Hindida Mareykanka iyo/ama bulshada LGBTQ +, sababtoo ah Shirkadaha Tubaakada waxay u bartilmaameedsadeen xayeysiintooda meelaha aad ku nooshahay, ka shaqeyso oo aad ku cayaarto si aad ugu hayso maskaxda mentholka.
Waxaan bixinaa taageero lacag la’aan ah iyo ilo kaa caawin kara inaad isaga joojiso hab ku habboon baahiyadaada. Xaqiiqdii, hadda markaad isku dayeyso inaad joojiso menthols iyadoo ay ku caawinayaan tababbarayasha Quit Partner, waxaad xaq u yeelan kartaa kaar hadiyad ah. Kaliya wac 1-800-QUIT-NOW si aad waxbadan u barato.
In kabadan 1 qof ee 3-dii qofba ee dadka LGBT ah ee sigaarka caba waxay isticmaalaan sigaarka mentholka.2
Minnesota gudaheeda, 30% ee Hindida Mareykanka oo sigaarka caba waxay isticmaalaan sigaarka mentholka.4
Halkan waxaa ah sabab kale oo aad noo soo wacayso: markii aad isku dayayso inaad joojiso menthols iyadoo ay kaa caawinayaan tababarayaasha Quit Partner, hadda waxaad xaq u yeelan kartaa kaarka hadiyadda. Kaliya wac 1-800-QUIT-NOW si aad waxbadan u barato.